मान्छेले जस्तै बोटबिरुवाले पनि कुराकानी गर्न सक्छन् ? – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ४ मंसिर २०७७, बिहीबार १५:३७
काठमाडौं । आफ्नो दुनियाँबाट पराया दुनियाँमा पुगेपछि सबैकुराहरू नौलो लाग्ने गर्छ । मानव गतिविधिलाई छाडेर हामी पशुपन्छीको जस्तो सुकै असामान्य व्यवहारलाई पनि चाख मानेर हेर्ने गर्छाैं । मान्छेको व्यवहारपछि हामीलाई पशुपन्छीको व्यवहार केही हदसम्म भिन्न लाग्ने गर्छ । तर पशुपन्छीबाट पनि माथि उठेर बोटबिरुवाको व्यावहारिक पक्षतिर लाग्यौं भने मान्छेले नयाँ दुनियाँ पत्ता लगाउँछ । यही नयाँ दुनियाँको खोजीमा छन् माइक्रोसफ्ट कम्पनीको ‘प्रोजेक्ट फ्लोसेन्स’ र सिड्नी विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरू ।
उनीहरू मान्छे र जनावरले जस्तै बोटबिरुवाले पनि आवाज पहिचान गर्ने र प्रतिक्रिया जनाउने गर्न सक्छन् ? भन्ने कुराको खोजीमा लागेका छन् ।अनुसन्धानकर्ताहरूले धेरै हदसम्म बोटबिरुवाले बोल्न र सुन्न सक्ने कुरा पत्ता लगाएका छन् । बोटबिरुवामा प्रजनन् हुन्छ, अक्सिजन र कार्बनडाइअक्साइडको आदानप्रदान हुन्छ भने के बोटबिरुवाले एक आपसमा कुराकानी पनि गर्छन् होला त ?